Hay’adda FAO oo doomo casri ah ku wareejisay maamulka Puntland+Sawirro. | Somali National Television - sntv.so
Home PUNTILAND Hay’adda FAO oo doomo casri ah ku wareejisay maamulka Puntland+Sawirro.
Hay’adda FAO oo doomo casri ah ku wareejisay maamulka Puntland+Sawirro.
Hay’adda cunnada iyo Beeraha ee Qaramada midoobay (FAO), ayaa 12 Doomo kalluumeysi ah oo ay saaran yihiin Matoorro casri ku wareejisay Wasaaradda Kalluumeysiga iyo kheyraadka Badda ee Dowlad Gobaleedka Puntland, si loo soo nooleeyo shaqada iskaashatooyinka kalluumeysiga ee ka howl gala Xeebaha Puntiland
Maamulaha mashruuca CCAP ee Xafiiska FAO Soomaaliya, John Purvis, ayaa munaasabaddii ay Wasaaradda Kalluumeysiga Puntland kula wareegtay Doomaha ka hadlay ayaa sheegay in Gaadiidkani uu fursad shaqo oo muhiim ah siinayo Dhallinyaradaha Soomaaliyeed.
“Doomahaan waa caawimaad kale oo ka timid mashruuca CCAP ee ay maal geliso midawga Yurub kaas oo ka shaqeeya horumarinta qeybta Kalluumeysiga ee isku xirta fursadaha dahabiga ah ee ka jira Xeebaha Soomaaliya,sidoo kalana dhallinyarada Xeebaha fursado shaqo oo muhiim ah ka siiya xeyndaabka kalluumeysiga qiimaha leh,” ayuu yiri, John Purvis.
Wasiirka kalluumeysiga iyo kheyaadka Badda ee Puntland Cabdiqani Geelle Maxamed, ayaa sheegay in uu maamulkiisu ka go’an yahay in uu xaqiijiyo in Doomaha la guddoonsiiyay ay ka qeyb qaataan soo saaridda dakhliga iyo fursad siinta Dhallinyarada, isagoo hay’adda FAO iyo midowga Yurub ugu mahad celiyay taageeradooda joogtada ah ee lagu horumarinayo Kalluumeysiga Puntland.
Mashruucan ayaa waxaa ka faa’iideysanaya 1,000 Qofood, iyada oo hay’adda FAO sare u qaadayso, dhismaha awoodda hannaaka kalluumeysi, isla markaana bixinaysa tababarro lagu xoojinayo xirfadaha ballaaran ee looga baahanyahay Kalluumeysiga Dalka.
Previous articleSoomaaliya oo qorsheynaysa in ay dib u dhisto Safaaraddeeda Dalka Turkiga+Sawirro.
Next articleWasiirka Caafimaadka Soomaaliya oo ku guuleysatay abaal marin qaali ah
Wasiirro, saraakiil ciidan iyo guddiga doorashada Puntland oo ka shiray amniga doorashada
Maxay ka wadahadleen madaxweyne Deni iyo safiirka UK?
Wasiirka Qorsheynta XFS oo maanta safar isaga gudbay dhowr degmo oo Puntland ka tirsan